ဗီချိုင်းရဲ့ နာမည်ကတော့ လက်စတာပရိသတ်တွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ ထာဝရရှင်သန်နေမှာပါ
လက်စတာအသင်းအတွက် ဒဏ္ဍာရီဆန်တဲ့ ပုံပြင်ကို အသက်သွင်းခဲ့သူ ပဲ့ကိုင်ရှင် ဗီချိုင်း Vichai
29 Oct 2018 . 2:44 PM
၂၈-၁၀-၂၀၁၈။ အဲဒီနေ့ဟာ လက်စတာပရိသတ်တွေအတွက် ဘယ်တော့မှ မေ့နိုင်စရာ၊ ထိခိုက်ကြေကွဲစရာ အကောင်းဆုံး နေ့ရက်တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ပြီ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့အသင်းအတွက် ဒဏ္ဍာရီဆန်ဆန် ပုံပြင်ကို အသက်သွင်းခဲ့သူ၊ အသင်း အောင်မြင်ဖို့ စိတ်ရော၊ ကိုယ်ပါ ရင်းနှီးမြုပ်နှံခဲ့သူ အသင်းပိုင်ရှင် ဗီချိုင်း Vichai Srivaddhanaprabha ရဟတ်ယာဉ် မတော်တဆမှုကြောင့် သေဆုံးခဲ့တဲ့နေ့ဖြစ်ပြီး လက်စတာအသင်းအတွက် ဘယ်တော့မှ အစားထိုးလို့မရတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ဆုံးရှုံးလိုက်သလိုပါပဲ။ “The Foxes” လို့ အမည်ပြောင် သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ လက်စတာအသင်းဟာ ဗီချိုင်းလက်ထက်မှာ အသင်းပရိသတ်တွေ ကိုယ်တိုင်တောင် မမျှော်လင့်ထားတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံဆုကို ၂၀၁၅-၁၆ ရာသီမှာ ရယူနိုင်ခဲ့တယ်။
အဲဒီမတိုင်ခင် လက်စတာအသင်း သမိုင်းတစ်လျှောက် အင်္ဂလန်အမှတ်ပေးလိဂ် အမြင့်ဆုံး ရပ်တည်မှုက ၁၉၂၈-၂၉ ရာသီမှာ အဆင့်(၂)နေရာ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆင့်မြင့်တန်း ချန်ပီယံဆုဆိုတာက လက်စတာ ပရိသတ်တွေအတွက် ဒဏ္ဍာရီဆန်တဲ့ ပုံပြင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အဲဒါကို ဗီချိုင်းက အသက်ဝင်အောင် ဖန်တီးပေးခဲ့တယ်။
တခြားအသင်းပိုင်ရှင်တွေနဲ့ မတူတာက ဗီချိုင်းဟာ အသင်းပရိသတ်တွေနဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီး နေတတ်သူဖြစ်ပြီး ဒီနှစ်၊ ဧပြီလတုန်းက နယူးကာဆယ်နဲ့ပွဲမတိုင်ခင် ပရိသတ်တွေနဲ့အတူ သူ့မွေးနေ့ပွဲ ကျင်းပခဲ့သူပါ။ နောက်ပြီး လက်စတာအသင်း ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တော့ ဗီချိုင်းဟာ ကစားသမား (၁၉)ဦးကို BMW i8 ကားတစ်စီးစီ လက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်။
ဒီလို အသင်းပိုင်ရှင်မျိုးကို မမျှော်လင့်ဘဲ ဆုံးရှုံးရမယ်လို့ လက်စတာ ပရိသတ်တွေ ဘယ်လိုထင်တားမှာလဲ။ ဗီချိုင်းရဲ့ ကိုယ်ရေးအရာရှိဟောင်းဖြစ်တဲ့ Alex Hylton က ဗီချိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အခုလို ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ “ဗီချိုင်းဟာ တကယ့်ကို ဘောလုံးပရိသတ် စစ်စစ်ပါ။ တီဗီမှာ မန်ယူပွဲလာပြီဆို ပွဲမတိုင်ခင်ကတည်းက ထိုင်စောင့်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်ကစားသမားက ဘယ်သူဆိုတာလဲ အကုန်သိပြီးသား။ အဲဒါပြီးရင် လက်စတာပွဲကို ဆက်ကြည့်ခဲ့ပြီး ရုံးကနေ တော်တော်နဲ့ မပြန်ပါဘူး။ သူက လက်စတာပရိသတ်တစ်ဦးအဖြစ် အသင်းကို ၀ယ်ယူခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်”။
ပြည်တွင်းဖြစ် လက်မှုပစ္စည်းလေးတွေ ရောင်းချတာက စပြီး ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှာ King Power ကုမ္ပဏီကို ထူထောင်ခဲ့တဲ့ ဗီချိုင်းဟာ ရည်မှန်းချက်ကြီးသူ၊ ဇွဲရှိသူတစ်ဦးဆိုတာ ပြောစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူး။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ လက်စတာကို ၀ယ်ယူခဲ့ပြီး ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံဆုကို ဆွတ်ခူးခဲ့သူ၊ စိတ်ထားကောင်းပြီး ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းသူ ဗီချိုင်း အခုတော့ သူ ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ အရာအားလုံးကို လက်ပြနှုတ်ဆက်သွားပါပြီ။ ဗီချိုင်းမရှိတော့ပေမယ့် သူ့ရဲ့ နာမည်ကတော့ လက်စတာအသင်းနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ ထာဝရရှင်သန်နေဦးမှာပါ။ သူ့ရဲ့မျိုးဆက်တွေက လက်စတာအသင်းကို ဗီချိုင်း ချမှတ်ခဲ့တဲ့ လမ်းကြောင်းအတိုင်း ဆက်လျှောက်လှမ်းနိုင်အောင် ကြိုးစားသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတော့တယ် . . .
လကျစတာအသငျးအတှကျ ဒဏ်ဍာရီဆနျတဲ့ ပုံပွငျကို အသကျသှငျးခဲ့သူ ပဲ့ကိုငျရှငျ ဗီခြိုငျး Vichai
၂၈-၁၀-၂၀၁၈။ အဲဒီနဟေ့ာ လကျစတာပရိသတျတှအေတှကျ ဘယျတော့မှ မနေို့ငျစရာ၊ ထိခိုကျကွကှေဲစရာ အကောငျးဆုံး နရေ့ကျတဈခု ဖွဈလာခဲ့ပွီ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ သူတို့အသငျးအတှကျ ဒဏ်ဍာရီဆနျဆနျ ပုံပွငျကို အသကျသှငျးခဲ့သူ၊ အသငျး အောငျမွငျဖို့ စိတျရော၊ ကိုယျပါ ရငျးနှီးမွုပျနှံခဲ့သူ အသငျးပိုငျရှငျ ဗီခြိုငျး Vichai Srivaddhanaprabha ရဟတျယာဉျ မတျောတဆမှုကွောငျ့ သဆေုံးခဲ့တဲ့နဖွေ့ဈပွီး လကျစတာအသငျးအတှကျ ဘယျတော့မှ အစားထိုးလို့မရတဲ့ လူတဈယောကျကို ဆုံးရှုံးလိုကျသလိုပါပဲ။ “The Foxes” လို့ အမညျပွောငျ သတျမှတျခံထားရတဲ့ လကျစတာအသငျးဟာ ဗီခြိုငျးလကျထကျမှာ အသငျးပရိသတျတှေ ကိုယျတိုငျတောငျ မမြှျောလငျ့ထားတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျခနျြပီယံဆုကို ၂၀၁၅-၁၆ ရာသီမှာ ရယူနိုငျခဲ့တယျ။
အဲဒီမတိုငျခငျ လကျစတာအသငျး သမိုငျးတဈလြှောကျ အင်ျဂလနျအမှတျပေးလိဂျ အမွငျ့ဆုံး ရပျတညျမှုက ၁၉၂၈-၂၉ ရာသီမှာ အဆငျ့(၂)နရော ရပျတညျနိုငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ အဆငျ့မွငျ့တနျး ခနျြပီယံဆုဆိုတာက လကျစတာ ပရိသတျတှအေတှကျ ဒဏ်ဍာရီဆနျတဲ့ ပုံပွငျတဈခုဖွဈပွီး အဲဒါကို ဗီခြိုငျးက အသကျဝငျအောငျ ဖနျတီးပေးခဲ့တယျ။
တခွားအသငျးပိုငျရှငျတှနေဲ့ မတူတာက ဗီခြိုငျးဟာ အသငျးပရိသတျတှနေဲ့ ရငျးရငျးနှီးနှီး နတေတျသူဖွဈပွီး ဒီနှဈ၊ ဧပွီလတုနျးက နယူးကာဆယျနဲ့ပှဲမတိုငျခငျ ပရိသတျတှနေဲ့အတူ သူ့မှေးနပှေဲ့ ကငျြးပခဲ့သူပါ။ နောကျပွီး လကျစတာအသငျး ပရီးမီးယားလိဂျ ခနျြပီယံဖွဈခဲ့တော့ ဗီခြိုငျးဟာ ကစားသမား (၁၉)ဦးကို BMW i8 ကားတဈစီးစီ လကျဆောငျပေးခဲ့တယျ။
ဒီလို အသငျးပိုငျရှငျမြိုးကို မမြှျောလငျ့ဘဲ ဆုံးရှုံးရမယျလို့ လကျစတာ ပရိသတျတှေ ဘယျလိုထငျတားမှာလဲ။ ဗီခြိုငျးရဲ့ ကိုယျရေးအရာရှိဟောငျးဖွဈတဲ့ Alex Hylton က ဗီခြိုငျးနဲ့ပတျသကျပွီး အခုလို ပွောခဲ့ဖူးပါတယျ။ “ဗီခြိုငျးဟာ တကယျ့ကို ဘောလုံးပရိသတျ စဈစဈပါ။ တီဗီမှာ မနျယူပှဲလာပွီဆို ပှဲမတိုငျခငျကတညျးက ထိုငျစောငျ့နသေူဖွဈပါတယျ။ ဘယျကစားသမားက ဘယျသူဆိုတာလဲ အကုနျသိပွီးသား။ အဲဒါပွီးရငျ လကျစတာပှဲကို ဆကျကွညျ့ခဲ့ပွီး ရုံးကနေ တျောတျောနဲ့ မပွနျပါဘူး။ သူက လကျစတာပရိသတျတဈဦးအဖွဈ အသငျးကို ဝယျယူခဲ့တာလညျးဖွဈပါတယျ”။
ပွညျတှငျးဖွဈ လကျမှုပစ်စညျးလေးတှေ ရောငျးခတြာက စပွီး ၁၉၈၉ ခုနှဈမှာ King Power ကုမ်ပဏီကို ထူထောငျခဲ့တဲ့ ဗီခြိုငျးဟာ ရညျမှနျးခကျြကွီးသူ၊ ဇှဲရှိသူတဈဦးဆိုတာ ပွောစရာလိုမယျမထငျပါဘူး။ ၂၀၁၀ ခုနှဈမှာ လကျစတာကို ဝယျယူခဲ့ပွီး ပရီးမီးယားလိဂျ ခနျြပီယံဆုကို ဆှတျခူးခဲ့သူ၊ စိတျထားကောငျးပွီး ဘာသာတရားကိုငျးရှိုငျးသူ ဗီခြိုငျး အခုတော့ သူ ခဈြမွတျနိုးတဲ့ အရာအားလုံးကို လကျပွနှုတျဆကျသှားပါပွီ။ ဗီခြိုငျးမရှိတော့ပမေယျ့ သူ့ရဲ့ နာမညျကတော့ လကျစတာအသငျးနဲ့ ပရိသတျတှရေဲ့ ရငျထဲမှာ ထာဝရရှငျသနျနဦေးမှာပါ။ သူ့ရဲ့မြိုးဆကျတှကေ လကျစတာအသငျးကို ဗီခြိုငျး ခမြှတျခဲ့တဲ့ လမျးကွောငျးအတိုငျး ဆကျလြှောကျလှမျးနိုငျအောငျ ကွိုးစားသှားမှာပဲ ဖွဈပါတော့တယျ . . .